Daawooyinka PCT-ga ee soo kabashada -Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
/blog/fluoxymesterone , tamoxifen-citrate/Daawooyinka PCT ee soo kabashada –Nolvadex, Clomid, Letrozole, Aromasin, Halotestin
Posted on 11 / 05 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray fluoxymesterone, tamoxifen-citrate.
In goobta bodybuilding, sida loo doorto a steroids haboon bodybuilding waa su'aal si aad u weydiiso, sidoo kale waxaa kale oo ku saabsan MuscleTalk waa, in ay tahay sida loo doorto therapy wareegga boostada (PCT) daroogada sida Clomid, Nolvadex iyo Letrozole, Aromasin, Halotestin, Anastrozole sax ah. Waxaannu ku siinaynaa inaan kuu barno sida loo doorto daawooyinka PCT-da habboon.
Waa maxay Daawooyinka PCT?
Daaweynta wareegga dambe (PCT) waa hab loo adeegsado daawooyin ka shaqeeya habab kala duwan oo loo maro, waa nidaam ku lug leh xeryahooda gaarka ah, nafaqada, iyo inta badan daawooyinka dawooyinka si looga caawiyo xakamaynta heerarka estrogen, dib-u-habeynta heerarka hoormoonka oo dib kuugu soo celiyo caadi ahaan ka dib wareegga prohormones / steroids.Muddoyinka anabolic ee badankood, gaar ahaan androgens, waxay sababaan xakameynta wax soo saarka testosterone ee jirka. Marka jir-dhisuhu ka soo baxo wareegga steroid, dabiici ah testosterone wax soo saarku waa eber, heerarka steroids ee dhiigga laga qaado ayaa hoos u dhacaya. Taasi ayaa ka dhigeysa saamiga of catabolic: hormoonnada dhiska ee dhiigga sare, sidaa jidhku waa ku jira xaalad ah catabolism, iyo, iyada oo sababtu tahay, wax badan oo ka mid ah unugyada muruqa oo la helay on wareegga waxaa haatan ay noqon doontaa lost.Thus, PCT waxay noqotaa baahi marka bodybuildingWaa kuwan lixda daawo ee PCT, waanu soo bandhigi doonaa iyaga iyo shaqadooda kala duwan ee PCT.
Daawooyinka PCT Nolvadex
Nolvadex, sidoo kale loo yaqaan tamoxin Citrate, isticmaalka ugu weyn ee caafimaad ee nolvadex waa daaweynta labada kansarka naasaha hore iyo sare ee pre iyo post dhaleysnimada women.Used sida daroogada PCT ee loogu talagalay bodybuilding,
Nolvadex ayaa sida ugu fiican loogu isticmaalaa in lagu caawiyo kor u qaadista LH iyo wadarta testosterone. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka soo kabato wareegga, taas oo ka dhigaysa xulasho caan ah daaweynta wareegga dambe (PCT). Clomiphene, isku-darka tamoxifen waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee soo kabashada inta ugu badan ee PCT-ga. jidhkuna mar dambe ma soo saaro testosterone-kiisa; ereyo fudud, waxsoosaarkaaga testosterone dabiiciga ah wuu xirmayaa.
Waxay u shaqeysaa iyada oo kicineysa hypophysis si loo sii daayo gonadotropins badan.Waxay ku shaqeysaa joojinta estrogen in ay gasho pituitary, taas oo u maareysa soo saarista LH Kadibna kor u kac wadarta heerarka testosterone ee u oggolaanaya daaweynta wareegga dambe ee siman (PCT) . Natiijo ahaan, faa'iidooyinka Nolvadex ayaa kaa caawin doona inaad yareyso waxyeellooyin kasta oo ku yimaada faa'iidooyinka murqaha illaa inta jidhkaagu awood u yeelanayo inuu soo kabsado.
Daawooyinka PCT Clomid
Clomid, oo sidoo kale loo yaqaan Clomiphene Citrate, waa SERM (modulator xajmiyaha daaweynta estrogen ee xaddidan), sida tamoxifen (nolvadex). Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa induction induction, taas oo faa'iido u leh kuwa ku yaraaday.
Sida nolvadex, Clomid woks iyada oo kicinaysa hypophysis si loo sii daayo gonadotropins badan. Gonadotropins waa hormoonno borotiin ah oo ay soo saaraan unugyada gonadotrope ee qanjirka 'pituitary gland' waxayna kiciyaan dhaqso iyo sare sii deynta hormoonka kiciya follicle (FSH) iyo hormoonka luteinizing (LH). Marka kororka gonadotropins dhaco, kororka LH wuxuu kicin doonaa wadarta heerarka testosterone taasoo u oggolaanaysa isticmaaleha inuu si macmal ah u ilaaliyo heerarka testosterone sare illaa inta jirkoodu awood u yeelanayo inuu soo kabsado, sidaasna ku ilaaliyo guulaha. (PCT) oo ka mid ah kuwa wareegaya steroids anabolic.
Daawooyinka PCT Letrozole
Letrozole, magaca caanka ah, Femara. Daawadan ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kansarka naasaha qaarkood (sida hormoon naas-nuujin naas-nuujin ah) dumarka ka dib dhalmada. Sidoo kale, loo isticmaalo daroogooyinka PCT, daroogada Letrozole wuxuu yareeyaa qiyaasta estrogen ee jidhka ka dhigta oo caawiya hoos u dhigista falcelinta feminization.
Letrozole (jiilka seddexaad) waa a steroidatik aan xulanayn aromatse inhibitor kaas oo sida Arimadex uusan u bixin doonin saamaynta androgenic. Waxay aad ugu egtahay Arimadex taas oo sababta labadaba loogu yeero Type2 non-sterodial tartan aromatase inhibitor. Farqiga ugu weyn ee udhaxeeya Femara iyo Arimadex ayaa ah in Femara ay tahay mid aad u awood badan, isla markaana leh qiimo tartan.Hadda faa'iidooyinka letrozole waa in haddii estrogen uu bilaabo inuu ka xanaajiyo unugyada qanjidhada ee unugyada naaska, letro haddii lagu soo bandhigo waqtigeeda waxay cadeyn doontaa arrimaha. gacanta, wuxuu awoodi doonaa inuu ka takhaluso jimicsiga. Xusuusnow ha u isticmaalin inta lagu jiro PCT-ga inay waxyeello u geysato libido iyo lipids-ka qofka, kaliya inta lagu jiro wareegga oo fadlan ka taxaddar tan iyo tan aad u anti-estrogenic.
Daawooyinka PCT Aromasin
Aromasin, oo sidoo kale loo yaqaan Exemestane,
Waa isdifaac Aromatase inhibitor ah oo ka celiya Aromatase Enzyme inuu abuuro Estrogen waxaa lagu magacaabaa Aromatase Inhibitor. Sidoo kale, waa steroidal AI ah oo ka ilaalisa inay si xun u saameynayso lipids-kaaga sida AI-yada kale ee aan steroid ahayn. Sidoo kale maaha beerka sun, waana la ordi karaa muddo dheer oo aan saameyn xun lahayn taas oo dhab ahaantii ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu caansan ee loogu talagalay jir-dhiseyaasha.
Sidee Aromasin u shaqeeyaa? Gabi ahaan ma dili doono estrogen waxayna fureysaa qeybta ku xirta soo dhoweyaha. Nolva waxay asal ahaan ka hortagi doontaa estrogen inuu ku xirnaado soo dhoweynta laakiin. Dhammaan estrogen-ka wali dul sabeynaya hareeraha la dhisayo. Marka markaad ka soo degto waxay bilaabi kartaa xirmid markale waxayna ku siin kartaa dib u soo celinta Gyno. Waxaad isticmaali kartaa aromasin inta aad ku dhexjirtid wareega iyo pct.
Daawooyinka PCT Halotestin
Halotestin, oo loo yaqaana Fluoxymesterone.Fluoxymesterone waa stomoid anaboleed caadi ah oo loo isticmaalo daaweynta hypogonadism ama heerarka testosterone hoose ee ragga muddo sanado ah.
Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa daawaynta gabdhaha bini-aadanka iyo dib-u-eegista naasaha naaska dumarka ah.
Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah fluoxymesterone waxaa lagu sifeeyay asrogen, shaqada ugu weyn ee Halotestin ama habka waxqabadka waa in la bartilmaameedsado oo lagu xiro qaboojiyeyaasha androgen.
Sababtan awgeed, waxaa loo yaqaan 'agonist reseptor reseptor'; ka feker sidan oo kale sidii kicin oo bilaaba hawlaha asrogens.
Androgens waa hormoono lab ah kuwaas oo saameeya horumarinta iyo dayactirka sifooyinka lab ah ee lab ah. Intaa waxaa dheer, waxay:
Kobcinta xanuunka macaan ee proteinska
Hoos u dhigidda habka loo yaqaan amino acids
Hagaajinta isku dheelitirnaanta kiimikada qiimaha leh oo ay ka mid tahay potassium, fosfooraska, iyo nitrogen
Xakamee iyo / ama hor istaagtaa soo celinta estrogen
Awoodda fluoxymesterone si looga hortago xayawaanka estrogen waa mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan ee loo isticmaalo daaweynta kansarka naasaha dumarka ah.
Daawada PCT Anastrozole
Anastrozole waa nooca 2-yada ah ee lagu magacaabo aromatase inhibitor (jiilka labaad) kaas oo ka shaqeynaya xayirista aromatase enzyme (chromosome P450), enzyme furan oo mas'uul ka ah beddelidda testosterone ilaa estrogen. Waxaay kor u qaadi kartaa testosterone, hoos u dhigta estrogen (laakiin maaha aad u badan), iyo in la ilaaliyo xirmooyinka caafimaadka leh iyo lipid.
Arimidex waxay ku shaqeysaa iyada oo kicinaysa wax soo saarka testosterone dabiiciga ah taas oo ah fikradda iyo sababta aad u fuliso qorshe PCT ah waxayna u sameyn doontaa si aad u ballaaran. Si kastaba ha noqotee, sida ay tahay dabeecaddeeda waxay sidoo kale si aad ah u yareyn doontaa qadarka estrogenka ee jirka iyo inta lagu jiro muddada PCT-da ujeedkeedu ma aha oo kaliya dib u bilaabista wax soo saarka testosterone dabiiciga ah laakiin wuxuu awood u siinayaa jirkeenna inuu ku laabto heerarkooda caadiga ah ee soo saarista hoormoonka. Estrogen-ka waxaa badanaa loo arkaa inuu yahay cadaw laakiin runti waa hormoon aad muhiim ugu ah jirka, gaar ahaan markaan tixgelinno muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo nidaamka difaaca jirka oo si habboon u shaqeynaya. Sababtaas awgeed, SERMyaashu waa xulasho aad ufiican oo loo adeego ujeedada dhiirrigelinta wax soo saarka testosterone dabiiciga ah inta lagu jiro qorshaha PCT; SERM-yada sida Nolvadex iyo Clomid marwalba waa xulasho wanaagsan sidoo kale qiimaha, waxay aad uga badanyihiin sedexda daroogo ee uguhoreeyay ee aan kabilaabnay bilowga marinka Si kastaba ha noqotee, shaki kuma jiro in Arimadex uu awood leeyahay maadaama uu xayirayo in kabadan 95 % of estrogen kujira xoogsaarashada ugu sareysa, agagaarka Letro laakiin aan sidaa usii xooganeyn.
Fluoxymesterone / Dufanka Halotestin cayriin Hordhac
Waa maxay isticmaalka duritaanka Nandrolone decanoate? Waa maxay bacda Oxandrolone loo isticmaalo?